Kenyatta oo markii 2-aad madaxweynaha Kenya loo dhaariyay iyo Netanyahu oo… | Entertainment and News Site
Home » News » Kenyatta oo markii 2-aad madaxweynaha Kenya loo dhaariyay iyo Netanyahu oo…
Kenyatta oo markii 2-aad madaxweynaha Kenya loo dhaariyay iyo Netanyahu oo…
daajis.com:- Waxaa goordhaw markii 2aad madaxweynaha dalka Kenya loo dhaariyay Uhuru Kenyatta, arrintan ayaa dhacday xaflad ka dhacday garoonka kasaraani taasi oo ay ka soo qeyb-galeen in ka badan 10 hoggaamiye oo Afrikaan u badan.
Illaa 20 madaxda adduunka ah ayaa kasoo qeybgalay caleemo saarka.
Mar sii horeysay ciidamada booliiska ayaa sunta dadka kaga ilmeeysiisa ku furay taageerayaasha Kenyatta oo isku dayayay in ay xoog ku galaan garoonka xili kuraastii ay ka buuxsantay.
Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa caleemo saarka Kenyatta ku tilmaamay sidii boqor isaga isku caano shubay oo kale, isaga oo sheegay in isla maanta xaflad baroor diiq ah ay ku qabanayaan meel Nairobi ka mid ah, taas oo loogu murugoonayo dadkii ay Booliiska laayeen.
Netanyahu isaga oo sii hadlaya ayaa waxuu yiri “ Waxaa naga go’an inaan si qoto dheer aan xariir ula yeelano qaaradda Afrika, annaga oo xariir la sameyneyno dowladaha aanu naga dhaxeynin wax xiriir diblomaasiyadeed ah”.